Immunoglobulins နှင့် DHA အများကြီးပါဝင်ပါသည်။ ကူးဆက်ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ဦးနှောက် နှင့် မျက်စိအာရိုလွှာ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွား ခြင်း ကို ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
မိခင်နို့ရည် ၏ ပရိုတင်ဓါတ် သည်ျွှ့နပ စမသအနငည ဖြစ်ပြီး အစာကြေရန်လွယ်သည်။ မိခင်နို့ရည် ထဲတွင် မြနျေအ-ိနခသာစသျငအငသည သ် အ့နူငဈေန ပါပြီး အစာကြေရန် လွယ်ကူသည်။ လျှပ်လိုက်ပစ္စည်း နှင့် သံဓါတ် မများသောလည်း စုတ်သွင်းရန် ကောင်း၍ ကျောက်ကပ်၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
မိခင်နှင့် သားသမီး အကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ထူထောင် ပြီး သားသမီးအတွက် စိတ်ဖက် အာဟာရ ဖြစ်ပါသည်။ သားသမီး၏ ကိုယ်ဖက် နှင့် စိတ်ဖက် လိုအပ်ခြင်း ကို ဖြည့်ဆည်း နိုင်သည်။
ချိုသာသည်။ နို့မှုန့်ဖြင့် ကျွေးမွေးလျှင် အများကြီး ကုန်ကျမည်။ မိခင်နို့ရည် ဖြင့်နို့ တိုက်လျှင် စီးပွါးရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှု ကို လျှော့ချမည်။
မိခင်နို့ရည် ကို တိုက်ရိုက် သောက်ရသည်။ နို့ဗူး သန့်ရှင်းရာ မမှန်ကန်မှု၊ မိခင် လက်လျှော်ရာ မလုံလောက်မှု၊ နို့မှုန့် ဖျော်ရာ မမှန်ကန်မှု၊ နို့မှုန့်ထုတ်လုပ်ရာ မမှန်ကန် မှု စသော အန္တရာယ်များ ကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်သည်။
နို့ဗူး မလိုတော့ဘူး။ အပြင်ကို ထွက်လျှင် အချိန်မရွေး သောက်နိုင်သည်။ ကလေး အတွက် အပူချိန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
နို့စုတ်ရာတွင် ကလေး ၏ ပါးစပ်ကို လေ့ကျင်စေပြီး သွားဖုံး ကို တောင့်တင်းစေ၍ မျက်နှာ ချောစေနိုင်သည်။
အလာဂျီ လွယ် သည် ကလေးကို မိခင်နို့ရည် ဖြင့် နို့တိုက်လျှင် နွှားနို့ဖြစ်တတ်သော ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ လေပြွန်ရောင်နာခြင်း၊ မောဟိုက်ခြင်း၊ နှင်းခူခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုညံ့ဖျင်းခြင်း စသည်များကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်သည်။
မိခင် နို့ရည် ဖြင့် နို့တိုက်လျှင် သားအိမ်ကျုံ့စေမည်။ ၄င်းသည် မွေးဖွားပြီး မိခင် နာလှန်ထရန် အကျိုးရှိ ပြီး ရာသီပေါ်ချိန် ကို ရွှေ့ဆိုင်ကာ သဘာဝ ပဋိသန္ဓေ ကို တား နိုင်သည်။ ဒိပြင် မိခင်၏ အဆီ ကို ကုန်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ နေသားတကျအခြေသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိရန် အကျိုးရှသည်။ စာရင်းကောက်ချက်အရ မိခင်နို့ရည်ဖြင့် နို့တိုက်လျှင် မိခင် သည်ျာေအသခမေခငညသာယေ သလမေငညေ ခညေခနမ နှင့် ဥျအနသစသမသျငျ စသောရောဂါများကို ရှောင်ကြဉ် နိုင်သည်။
2.Q：ကျွန်မ ၏ နို့ရည် လုံလောက် ရဲ့လား။
A：မိခင်နို့ရည်ဖြင့် နို့တိုက်သော မိခင်များ သည် ဒီကိစ္စကိုပူပန်သည်။ သူတို့သည် ကလေး ငိုလျှင် မဝဘူး လို့ထင်းသည်။ ကလေး၏ လိုအပ်မှုကို နားလည်ရမည်။ အများအားဖြင့်ဆိုလျှင် ကလေးအတွက် မိခင် နို့ရည် ဟာ လုံလောက်သည်။ မိခင်နို့ရည်သည် ကလေး၏လိုအပ်ခြင်းအလိုက် ဖန်တီးတာဖြစ်သည်။ နို့ရည်မလုံလောက်သော အဓိကအကြောင်းအရင်းသည် ကလေး ၏ နို့စုတ်ခြင်း မလုံလောက်ပေ ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးစုတ်လေ နို့ရည် များလေ။ နို့မှုန့်ဖြင့် နို့တိုက်လျှင် ကလေး ၏ နို့စုတ်ခြင်း ကို လျှော့ချ ပြီး ကလေးသည် နို့ဗူး ဖြင့် သောက်တတ်ကာ မိခင် ၏ နို့အုံ ကို မ စုတ်ချင် ဘူး။
3.Q：နို့တိုက်ရာတွင် နို့ရည် တိုးပွါးရန် မိခင်သည် ထူးခြားသော အစားအစာ လိုမလား။
A：သုတေသနအရ နို့ရည်၏ အရေအတွက် နှင့် အရည်အချင်း သည် မိခင်၏ အစားအစာနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာ မဟုတ်၊ နို့ရည်သည် ကလေး၏ နို့စုတ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဒါကြောင့် ကလေးသည်မှန်ကန် သော နည်းဖြင့် နို့စုတ်လျှင် နို့ရည်သည် ကလေးအတွက် လုံလောက်မည်။
4.Q：မိခင်နို့ရည်ဖြင့်နို့တိုက်ရာ တစ်နေ့လျှင် အလေးသွား ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိမည်လဲ။
A：မိခင်နို့ရည် ဖြင့်နို့တိုက်ရာ တစ်နေ့လျှင် အလေးသွား သော အကြိမ်ဆိုလျှင် ကာခြားသည်။ ပထမ တစ်လ နှစ်လ အတွင်းတွင် ကလေး ၏ ချေးသည် အများအားဖြင့် ကျဲပြီးတော့ ချွဲကျိုရည်ရှိသည်။ တစ်ချို့သည် အလုံးအစေ့ရှိပြီး အချဉ်ရှိသည်။ တစ်ချို့သည် တစ်နေ့လျှင် ၈ ကြိမ်ထက်များသည်။ ဒါတွေဟာ ပုံမှန်ပြီး ဝမ်းလျှောတာမဟုတ်ဘူး။ အများအားဖြင့်ဆိုလျှင် ဤ အခြေအနေ သည် အစိုင်အခဲ အစားအစာ များ စားသည့်အခါ ထိ ဆက်လက်ထားရှိမည်။ သို့ရာတွင် တစ်လ နှစ်လ ပြီးနောက် ကလေးတစ်ချို့သည် ရက်ပိုင်းတွင် အလေးသွား တစ်ကြိမ်သာရှိသည်။အများ အားဖြင့် ကလေး ၏ ချေး သည် အပျော့ချေး ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချို့ကလေး တောင် တစ်ပတ် နှစ်ပတ် အတွင်းတွင် အလေးသွား တစ်ကြိမ်သာ ရှိသည်။ ဒါဝမ်းချုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ မိခင်နို့ရည်သည် အကောင်းဆုံးနို့ရည် ဖြစ်ပြီး အကုန်လုံး စုတ်ုယူနိုင်သည်။ ကလေးသည် ဝမ်းဖေါခြင်း၊ ငိုပြီးအတည်အငြိမ်ဖြစ်ခြင်းမရှိ၍ တက်ကြွပြီး သားရည်ပျော့ပျောင်းကာ အပေါ့သွား အခြေအနေ ပုံမှန်လျှင် မစိုးရိမ်ရဘူး။
5.Q：ကျွန်မ Fullness သောအခါ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
A：Fullness သောအခါ ကလေး ကို စုတ်ခိုင်ရမည်။ စုတ်ပြီးတော့ နို့အုံပျော့ပြီး နို့ရည်ဂလင်း အဆင်ပြေစေမည်။ နို့တိုက်ပြီးတော Fullness မလျှော့လျှင် နို့ရည် ကို ညှစ် ပြီး Fullness ကို လျှော့နိုင်သည်။
A：ဆက်လက်နို့တိုက်ရသည်။ မိခင်သည် ရောဂါပိုးများ ကို ရင်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ခန္ဓာက ထူးခြားသော Immunoglobulin A ကိုဖန်တီးပြီး နို့ရည်အတွင်းသို့ ဝင်မည်။ ထို့ပြင် မိခင် ကိုယ်ခန္ဓာတွင် သွေးဖြူဥ သည် ရောဂါပိုးကို တွေ့လျှင် Phagocytes နှင်Y Lymphocyte များ ကို တက်ကြွစေပြီး အင်ဒီဘောဒီ ကို နို့ရည်တွင် ထုတ်လွှတ်မည်။ ၄င်း Immunoglobulin A သည် ကလေး၏ ဝမ်းထဲတွင် စိမ့်ထွက်ရည်တစ်မျိုး （secretory component）ကြောင့် အစာချေချဉ်ရည် ၏ ဖျက်စီးခြင်း ကို ခုခံနိုင်သည်။ မိခင် ဖျားရာတွင် ဆက်လက်နို့တိုက်လျှင် ကလေး ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။အများအားဖြင့်ဆိုလျှင် မိခင်သည် ပဋိဇီဝဆေး ကို သောက်ရာတွင် လည်း ဆက်လက်နို့တိုက်ရသောလည်း ကလေး ချေး၏ အခြေအနေ ကို စောင့်ကြည့်ရမည်။ မသေချလျှင် ဆရာဝန် ဆီသို့သွားမေးရမည်။
7.Q：ကလေး နို့ရည်အန်လျှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။A：ဒါရိုးရိုးပဲဖြစ်သည်။ ကလေးနို့သောက်တာ များလျှင် နို့ရည်အန်နိုင်သည်။ နို့ရည်သောက်ပြီး ကြို့ထိုးလျှင် လည်း နို့ရည် အန်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်လေ နို့တိုက်ပြီး တစ်နာရီ နှစ်နာရီ လောက် နို့ရည် အန်သည်။ အများအားဖြင့်ဆိုလျှင် နို့ရည်အန်ခြင်းသည် ကလေးအတွက် အခက်အခဲမရှိဘူး။ ကလေး အိပ်သော အခါ နို့ရည် အန် လျှင် လည်း အန္တရာယ် မရှိဘူး။ ကလေးတစ်ချို့သည် ခဏခဏ နို့ရည်အန်သည်။ သူတို့ ကြာရှည်စွာ ထိုင်နိုင်သော အခါ မှ အခြေအနေ ကောင်းလာမည်။ ကလေး အနည်းငယ်သည် တစ်နှစ်ပြည့် လျှင် လည်း နို့ရည်အန်နိုင်သည်။ ကလေး နို့ရည် သောက်ပြီး တော့ အားထုတ်ပြီး နို့ရည် ကို အကုတ်လုံး အန်၍ တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်ထက် များ လျှင် သို့မဟုတ် အလေးချိန် ကောင်းကောင်း မတိုးလျှင် ဆရာဝန် ကို သွားကြည့်ရမည်။ အောက်ပါ ဆောင်ရွက်ချက် များ သည် နို့ရည်အန်သည့်အခြေအနေ ကို လျှော့ချ နိုင်သည်။
၂။ နို့တိုက်ရာ ရုတ်တရက် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ အသံထွက်ခြင်း၊ အလင်းရောင်ထိုးခြင်း စသော စိတ်အာရုံ ပျံ့လွင့် နိုင်သော ကိစ္စများ ကို ရှောင်ကြဉ်ရန်။
၃။ နို့တိုက်ပြီး ကလေး ကို ရပ်စေရန်။
၄။ နို့တိုက်ပြီး ပြင်းထန်စွာ မကစားရန်။
၅။ ကလေး သိပ် မ င ခင် နို့တိုက်ရန်(ကလေး ပြင်းထန်စွာ မငိုရန်)။
၆။ နို့ဗူးဖြင့် နို့တိုက်လျှင် နို့သီးခေါင်း ၏ အပေါက် သင့်တော် အောင်လုပ်ရန်။
၇။ အိပ်သောအခါ ခုတင် ၏ ခေါင်ဖက် ကို မြင့်အောင် ခုထားပြီး ကလေး ၏ ဦးခေါင်း သည် ထက် ဝမ်းပိုက်ထက် မြင့်ရန်။
ကလေး နို့ရည် သောက်ပြီး တော့ အားထုတ်ပြီး နို့ရည် ကို အကုတ်လုံး အန်၍ တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်ထက် များ လျှင်သို့မဟုတ် အန်သော စရာ သည် အစိမ်းရောင်ဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် အလေးချိန် ကောင်းကောင်း မတိုးလျှင် ဆရာဝန် ကို သွားကြည့်ရမည်။
8.Q：မီခင်နို့ရည်ဖြင့် အနည်းဆုံး ဘယ်လောက်ကြာ တိုက်မလဲ။
A：မွေးဖွားပြီး နာရီးစက် မှ တစ်နာရီ အတွင်း မိခင်နို့ရည်ဖြင့် နို့ တိုက်ရမည် ဟွျှုံဥ နှင့့် င်္ဃြ ၁၉၉၉ခုနှစ် အကြံပေးခဲသည်။ ဒိအပြင်--
၁။ ကလေး အသက် ၆ လ အထိ မိခင်နို့ရည်ဖြင့်သာ နို့တိုက်ရန်။
၂။ ၆ လ ကျော် မှ အခြား အစားအစာ ကို ထည့်သွင်းရန်။
၃။ အသက် ၂ နှစ် ကျော် ထက် မိခင်နို့ရည် ဖြင့် ဆက်လက် နို့တိုက်ရန်။
အသက် ၁ နှစ် ကျော် ထက် မိခင်နို့ရည် ဖြင့် နို့တိုက်ပြီး မိခင် နှင့် ကလေး ၏ အခြေအနေ ကို အခြေခံ၍ နို့ဖြတ် သည့် အချိန် ကို သတ်မှတ် သည် ဟု ဗဗဏ အကြံပေးသည်။
9. Q：မိခင်နို့ရည်ဖြင့် နို့တိုက်ရာ မိခင် သက်သာလွတ်စား နိုင်သလား။
A：အာဟာရလုံလောက်လျှင် စားနိုင်သည်။ ဗီတာမင် B12 ကို သောက်ရမည်။ သက်သာလွတ်စား သော မိခင် သည် ကောင်းမွန် သော နို့ရည် ကို စိမ့်ထွက်နိုင်သည်။(ဗီတာမင် B12 သည် အသား တွင် သာ ပါဝင်သည်)
10.Q：နို့တိုက်သော စာတမ်းများ ကို ဘယ်နေရာမှာ ရရှိနိုင်သလဲ။
1.ထိုင်ပေမြို့တော် ကျန်းမာရေး အစိုးရဌာနရဲ့ ဝက်ဆိုက 》အဓိက စာမျက်နှာ 》မိခင်နှင့်ကလေး》မိခင်နို့တိုက်ရေး
2. အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးဌာနမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် စောင့်ရှောက်ရေး၏ ဝက်ဆိုက် 》 မိခင်နို့တိုက်ရေး
ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်စောင့်ရှေက်ရေး၏ ဖုန်းနံပတ် ၀၈၀၀-၈၇၀-၈၇၀( တရုတ်အသံထွက်းပေါင်ကျင်နင် ပေါင်ကျင်နင်)
ဝန်ဆောင်မှု စုံစမ်းမေးမြန်းချိန်းတင်္နံလာ မှ သောကြာ မနက် ၈နာရီ - ညနေ ၁၈နာရီ (အကယ်၍ အစိုးရရုံးပိတ်းရက် ပိတ်သည်)
3။ ထိုင်ဝမ် မိခင်နို့ရည် အသင်း။
4။ နိုင်ငံတကာ မိခင်နို့ရည် အသင်း။
5။ သမိူ ဗူငညေခန်သမ မြနျေအ်နနိငညါ ဗခအငသည (ျွှဗဗြ)
စာတမ်းအရင်းအမြစ်။ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ဝက်ဘဆိုက်၊
သတငျးအခကျြအလကျ update ကို：2016-08-03 14:37
သတငျးအခကျြအလကျ update ကို：2016-08-03 14:36